I-China Dropout Cutout High Voltage Compound Fuse uMvelisi kunye noMthengisi | Imbali
Ukulahla i fuse yenziwe ngenkxaso yokwambathisa kunye netyhubhu yefyuzi. Abafowunelwa engatshintshiyo esisigxina kumacala amabini inkxaso yokwambathisa kunye zoqhakamshelwano efakwe kwiincam ezimbini ityhubhu fuse. Ityhubhu ye-fuse yenziwe ngaphakathi ityhubhu yokucima i-arc, ityhubhu yephepha le-phenolic elingaphandle okanye ityhubhu yeglasi ye-epoxy.Ukuze uqhagamshelwe kunye ne-feeder engenayo yemigca yokuhambisa ikakhulu ikhusela isiguquli okanye imigca ukusuka kwisekethe emfutshane kunye nokulayisha ngaphezulu, kunye nokucima / ukulayisha ngoku.
I-fuse ye-Porcelain yokuyeka
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuba iinkcukacha ezingaphezulu. Ezinye iinkcukacha zinoku-odolwa ngokwemfuno zabathengi.
Ukukhusela ukukhuselwa okwangoku.
Uyilo lwangoku kunye nolwe-compact.
3.high amandla oomatshini.
Iimeko zeNkonzo yokusiNgqongileyo
Iimeko inkonzo 1.Normal: iqondo lobushushu kokuma ayikho ngaphezu kweqondo 40 degrees, hayi ngaphantsi kwe -40;
Umphakamo ongagqithiyo kwi-1000m;
Esona santya siphezulu somoya asiyi kuba ngaphezu kwe-35m / s;
Inyikima yayingenamandla kune-8 degrees.
Imveliso ayisebenzi kwezi ndawo zilandelayo:
Iindawo ezisengozini yokutsha okanye yokuqhuma;
Indawo yentshukumo enobundlobongela okanye ifuthe;
Ukuqhutywa kombane, isenzo segesi yemichiza kunye nongcoliseko olunzulu kwindawo yenkungu yetyuwa.
Ukucinywa kweFuse ngePorcelain Base ubukhulu becala isetyenziselwa ukukhusela imigca yokuhambisa kunye neziguquli ngokuchasene nomthwalo omninzi kunye nomonakalo omfutshane wesekethe. Inokuba sisixhobo sokukhupha unxibelelwano ngokusetyenziswa kwesixhobo esiphathwayo sokuqhawula umthwalo. I-fuse cutout iphuhlisiwe ukuze ilingane iimeko zenkonzo eziqhelekileyo kunye nokusetyenziswa kwaye iphumelele uvavanyo lohlobo lwelebhu ye-KEMA.
Chwetheza Umbane ulinganisiwe
(KV) Ikaliwe ngoku
(A) Umephuli wojikelezo
umthamo 3-isigaba (MVA) Ukuqhekeza ubuninzi
yangoku (KA) Ngaphezulu kwevolthi
(H) RWX10-35 / 0.5 35 0.5 2000 28 Amaxesha ama-2,5
(H) RWX10-35 / 3 35 3 2000 28 Amaxesha ama-2,5
(H) RWX10-35 / 5 35 5 2000 28 Amaxesha ama-2,5
Egqithileyo Ubushushu kwintengiso yokufudumeza ishushu ngentambo
Okulandelayo: Ihowuliseyili Chinese Product edityanisiweyo Cross Arm yokwambathisa